ယခုလက်ရှိရရှိသော ထူးဆန်းသောသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » ယခုလက်ရှိရရှိသော ထူးဆန်းသောသတင်း
Posted by manawphyulay on Jul 27, 2011 in Hoax | 26 comments
Gmail server မှ နောက်နာရီဝက်အတွင်း အွန်လိုင်းရှိနေသော Gtalk အကောင့်အားလုံးကို burn မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အကောင့်များပိတ်ထားကြရန် နေ့လည် သုံးနာရီမှသာ ပြန်လည် အသုံးပြုကြပါရန် သတိပေးအပ်ပါသည် အမြန်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါရန်
မှတ်ချက်။ ဟုတ်မဟုတ် မသိလို့ပါ။ သိတဲ့သူများ ပြောပြစေလိုပါသည်။
ဟုတ်တယ်။ တို့လည်း ရတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်သူ့မှ မသိဘူး။ မေးလို့လဲ မရဘူး။
He said “burn” the Gmail.
Burn = set on fire
Ban = Stop to Enter. That’z why, please call the “fire department” (mee thut).
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ facebook ထဲမှာ လည်း ကျွန်တော် နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိပေးပြီးပါပြီ….
ဟုတ် မဟုတ်တော့ သေချာမသိပါ။ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင် ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Ummm, it’s not logical.
But, I (also) don’t haveacourage to open it ( test it ).
Hee Hee, I will open it tomorrow larr.
Ban ချင် Ban
Burn ချင် Burn..စိတ်ဝင်စားဘူး
ဒါပေမဲ့.. တက်လာတဲ့သတင်းအရ… မြန်မာတွေကတော့..အင်တာနက်ကတိုက်ခိုက်တာမှာ. နံပါတ်၁ ဆိုနေတာမို့.. ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပါပဲ..။
သတင်းက ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပေမဲ့.. အချက်အလက်နဲ့မို့.. မြန်မာတွေက တိုက်ခိုက်သူမဟုတ်၇င်တောင်.. မြန်မာပြည်တွင်းဆာဗာတွေက..ဟက်ကာတွေအတွက်.Haven .ဖြစ်နေတယ်ပြောရမယ်..။
Akamai’s data comes from its own points of presence and only looks at the last networking hop beforeaconnection comes in. As such, it is possible that Myanmar is being used asaproxy for attacks as opposed to being the origination point itself.
“It could be the case that someone was bouncing attacks through Myanmar,” Belson said. “That would align with some of what we saw with attacks on port 9050.”
Port 9050 is often used for the open source Tor onion router, which is an anonymous proxy networking service. Belson noted that Myanmar’s top billing could beacase of the attack community doingabetter job at hiding their tracks.
Apple Patches iOS Again
Look Out: Your Android Is Leaking
Belson wasn’t sure if the Port 443 attacks were directly related to the SSL certificate attack against security vendor Commodo earlier this year.
“I don’t know if it was people trying to exploit those certificates or if it wasabroader SQL Injection type attack or something else,” Belson said.
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်မယုံတာပါပဲ..။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသလောက်ပါပဲ..။
ဒီအတိုင်း ဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သုံးနေကျတဲ့ Google Account တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူတို့ သုံးစေချင်လို့တောင် အလကားဖြန်ဝေနေတာ ဒီလိုလုပ်ရင်သူတို့အကျိုးယုတ်သွားမှာပေါ့.။
သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးပဲ .
ဘာဖြစ်လို့ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဘမ်းမှာလဲ …
ကိုယ်တော့မနက်ကအကောင့်ဖွင့်တာရပါတယ်.။ ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးး။ ကိုယ်ကအခုမှဒီသတင်းကိုဖွင့်မိတာ။အခုကမြန်မာမှာဆိုရင်၅နာရီနဲ.၄၅မိနစ်လောက်တော့ရှိပြီ။ (ညနေ)
ဆရာ/မအောင် အခု မှ ကျွန်တော် ဖွင့်တာတောင်
မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၇-၇-၁၁ ညနေ ၄:၀၅ ပဲ ရှိပါသေးတယ် ဘယ်လိုဖြစ်လို့ “အခုကမြန်မာမှာဆိုရင်၅နာရီနဲ.၄၅မိနစ်လောက်တော့ရှိပြီ” ဖြစ်ရတာလဲ
But, For your information,
Following Face Book virus is really attacking recently.
I already encounter this virus, one time.
“အစမှအဆုံး အကုန်လုံး ဖတ်စေချင်”
ကျုပ်ကအပူသမား။တောသားကြီး။အပူသမားတောသားကြီးက ခင်ဗျားတို့ ကိုအပူလို့ ရေးလိုက်ပြီ။
Facebook မှလူယုတ်မာအချို့ ကကျုပ်အကောင့်ကိုဟက်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တွေလိုက်ပို့ နေတယ်။ အဲဒီ ဗိုင်းရပ်စ် ကို ကျုပ်အရင်ဆုံးခံရတယ်။
“ဟိတ်ကောင် ငါ့ဟာပျက်ပြီ……လုပ်စမ်း…..”ဆိုတော့ ကျုပ်ရိုင်းမှန်းသိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက အားရပါးရပြင်ပေးဘို့ လက်ခံကြတယ်။ ကျုပ်ကိုချစ်တာကိုး။ ကျုပ်ကိုကူညီချင်တာကိုး။ ပြီးတော့ ကျုပ်ကအနောက်တိုင်းကလူ ။သူတို့ မပြင်ပေးလဲ အမှိုက်ပုံးထဲထည့်ပြီး အသစ်ဝယ်လိုက်ရုံရှိတာ။ (ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ မှ မရှိတာကိုး)
မြန်မာ ထိုင်း မလေးရှား စတဲ့အရှေ့ တိုင်းကလဲဖြစ်၊ကျုပ်လိုဘာမသိညာမသိလဲဖြစ် ပြင်ခကလဲဈေးကြီးဆိုရင် ပိုပြီးဒုက္ခရောက်နေမှာမို့အသိပေးလိုက်တယ်။ ( စင်္ကာပူ ဂျပန် စသည်က ပညာရှင် ငနဲကြီးများမပါ – ကျုပ်လိုခပ်အ အ များအတွက်သာ)
Nan Shin ဆိုတဲ့ကျုပ်အကောင့်နဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအကောင့်နဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူတို့ ရဲ့ Facebook ကို ချက်တင်ဝင်လာနိုင်တယ်။ သတိထားကြပေါ့။အဓိက က မိတ်ဆွေရင်းမဟုတ်ဘဲ ၀င်လာခဲ့ရင် ပိုပြီးတော့သတိထားကြပေါ့။
သူက ကိုယ့်လူကို စောင့်ပြီးတော့ချက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်လူရဲ့ အကောင့်ဖွင့်တာနဲ့ချက်တင်ဝင်မဲ့ software ကိုထည့်ထားမှာ။ ကိုယ့်လူကပြန်ချက်မှ သူ့ software ကပြန်ချက်မှာ။ ပြီးရင် မင်းရယ်ချင်လား၊ ဘာလား ညာလား စသည်ပေါ့။ ကိုယ့်လူ ကြိုက်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုမေးမှာ။ အင်း …..ဆိုတာနဲ့သူက link ပေးလိမ့်မယ်။ သူပေးတဲ့ link ကိုသွားတာနဲ့ကိုယ့်လူ နားကားပြီ သာမှတ်ပေတော့။ ကိုယ့်လူ မကားလဲ ကိုယ့်လူရဲ့ ကွန်ပြူတာကားပြီ။ အင်တာနက်ဆိုင် တွေကိုအမြင်ကပ်ရင်တော့ ကျုပ်ရဲ့Nan Shin အကောင့်ကို သွားပြီးတော့……… …..ဟိုင်း…လိုက်ကြပေတော့……….။ဟီးဟီး။ နောက်တာ သွားမလုပ်ကြနဲ့။ကျုပ်တို့ ဘုရားကသူများဒုက္ခရောက်အောင် မကြံစီခိုင်းဘူး။ မလုပ်ခိုင်းဘူး။ မပြောခိုင်းဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာလဲ ကိုယ်လုပ်ပေါ့။ ဘုရားမကြိုက်ရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေါ့။
ကျုပ်စကားတွေလဲ အတော်များနေပြီ။ နိဂုံးချုပ်မယ်။ facebook က ချက်တင်ဝင်ရင် သိသိမသိသိ သတိထား။ ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ့်လူဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ပြီးတော့မှဆက်ချက်။
မှတ်ချက်။ ။မဖတ်ဖတ်ဖြစ်အောင် ဆိုင်ကော်လော်ဂျီသုံး၍ ရိုင်းလိုက်ရပါသည်။
Lightning cristal says:
၄နာရီခွဲပြီ ခုထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး
ဟဲဟဲ….လာထား ၇ ပွိုင့်……။
အင်း…… ကျွန်တော်တော့ ရှိစု မဲ့ စု အကောင့်လေး ပျောက်မှာစိုး လို့ ပိတ်ထားပြီ။
ဘယ်သူ့ ဆီက စတဲ့ သတင်းပါလိမ့်။
ဒီသတင်းမျိုးတွေ ဘယ်သူတွေက တင်လိုက်ပါလိမ့်
၁၀ ရပြီ …
မောင်ကင်း အခု ၁၀ မရတော့ဘူး … ၇ ပဲ ရတာ မသိသေးဘူးထင်တယ် ….
ဗြဲ ..ဗြဲ ….
၃ ကျပ်က ကော်မရှင် ကြေးလား … အာမခံကြေးလား
ရူး တိုး တိုး ကင်း… သဂျီး ကြားသွားလို့ တစ်ကျပ်ခွဲနှုတ်နေဦးမယ်…
ပေး ၁၀ ကိုခိုင်
၇ယူပြီး ၃ပေးသွားသည်.. အဲ.. အဲဒါတော့ မရဘူး အွန်လိုင်း ၀င်ရတဲ့ အထိကို မအားသေးလို့.. နောက်မှ မွေနောက်ပြီး ပြန်ကြည့်ပေးမယ်။
ပိုက်ဆံလေးတွေ နှမြောတယ် ရွာသားတွေကို မလွမ်းချင်ဘူးဒါပဲ